ဘ‌‌လော့ခ် » ဒတ်ခ်ျယုံကြည်စိတ်ချရသောရုံးများကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့်အိမ်တွင်းပေါင်းပြင်ဆင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ချက်အသစ်
ဇန်နဝါရီလ 19, 2019
လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းဒတ်ခ်ျယုံကြည်မှုကဏ္ sector သည်အလွန်အမင်းထိန်းညှိထားသောကဏ္ sector ဖြစ်လာသည်။ နယ်သာလန်ရှိယုံကြည်မှုရုံးများကိုတင်းကြပ်သောကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောရုံးများသည်ငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်းနှင့်လိမ်လည်လှည့်စားသောပါတီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းတို့အတွက်ကြီးမားသောစွန့်စားမှုဖြစ်သည်ကိုနောက်ဆုံးတွင်အားပြိုင်မှုမှနားလည်သဘောပေါက်ပြီးနားလည်လာသည်။ ယုံကြည်မှုရုံးများကိုကြီးကြပ်ရန်နှင့်ကဏ္ sector ကိုထိန်းညှိရန်အတွက်ဒတ်ခ်ျယုံကြည်မှုရုံးကြီးကြပ်မှုအက်ဥပဒေ (Wtt) သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဤဥပဒေအရယုံကြည်မှုရုံးများသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ချက်များစွာနှင့်ပြည့်စုံရမည်။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရန်။ မကြာသေးမီက ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် Wtt အားနောက်ထပ်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုထပ်မံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဤဥပဒေပြုရေးပြင်ဆင်ချက်သည် Wtt အရနေထိုင်ခွင့်ပေးသူနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။ ဤပြင်ဆင်ချက်၏ရလဒ်အနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများသည် Wtt ၏နယ်ပယ်အောက်တွင်ကျရောက်နိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် Wtt ၏ပြင်ဆင်ချက်သည်အိမ်တွင်းနေထိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအဘယ်အရာနှင့်ပါ ၀ င်မှုနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၏လက်တွေ့အကျိုးဆက်များသည်ဤwithinရိယာအတွင်းတွင်ရှင်းပြသည်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။
ယုံကြည်မှုရုံးဆိုသည်မှာတရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ထက်ပိုသောယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖြစ်စေ၊ Wtt ၏အမည်ကဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်းယုံကြည်မှုရုံးများသည်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်အာဏာသည်ဒတ်ခ်ျဗဟိုဘဏ်ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်ဗဟိုဘဏ်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲယုံကြည်မှုရုံးများကိုနယ်သာလန်ရှိရုံးတစ်ခုမှလုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုပါ။ Wtt သည်အခြားဘာသာရပ်များအကြားယုံကြည်စိတ်ချရသောရုံးဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်နယ်သာလန်ရှိယုံကြည်မှုရုံးများနှင့်လိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်များပါဝင်သည်။ Wtt သည်ယုံကြည်ရသော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား ၅ မျိုးခွဲခြားသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့အစည်းများကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောရုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး Wtt အရခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
လိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်စာတိုက်လိပ်စာတစ်ခုနှင့်အတူထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း (domicile plus ထောက်ပံ့ခြင်း)၊
တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများရောင်းချခြင်းတွင်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်း၊
တစ် ဦး ဂေါပကအဖြစ်သရုပ်ဆောင်။
ဒတ်ခ်ျအာဏာပိုင်များသည် Wtt ကိုမိတ်ဆက်ရန်အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Wtt ကိုမမိတ်ဆက်မီ၊ အထူးသဖြင့်သေးငယ်သည့်ယုံကြည်မှုရုံးကြီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်မှုကဏ္ sector ကိုမြေပုံဆွဲ။ မရပါ။ ကြီးကြပ်မှုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်မှုကဏ္ of အပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်ကိုရရှိနိုင်သည်။ Wtt ကိုမိတ်ဆက်ရခြင်း၏ဒုတိယအကြောင်းရင်းမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော Financial Action Task Force သည်ယုံကြည်မှုရုံးများ၌ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်ဘဏ္fiscalာရေးဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်လာနိုင်မည့်အန္တရာယ်များကိုထောက်ပြခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများ၏အဆိုအရယုံကြည်မှုကဏ္inတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကြီးကြပ်မှုဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပြုရန်သမာဓိရှိမှုအန္တရာယ်ရှိသည်ဟုဆိုပါသည်။ ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရုံးများကိုမည်သူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသည်ကိုအဓိကထားသည့်သင်သိ - ဝယ်ယူသူနိယာမအပါအ ၀ င်အစီအမံများကိုလည်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သောအဖွဲ့များနှင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Wtt ကိုမိတ်ဆက်ရခြင်း၏နောက်ဆုံးအကြောင်းအရင်းမှာနယ်သာလန်ရှိယုံကြည်မှုရုံးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခြင်းသည်လုံလောက်မှုမရှိဟုယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ ရုံးအားလုံးကိုဌာနခွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်ပေါင်းစည်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ယုံကြည်မှုရုံးအားလုံးသည်တူညီသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာကြသည်။ ထို့အပြင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာစေရန်သေချာစေနိုင်သောကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တစ် ဦး လည်းပျောက်ဆုံးနေသည်။ Wtt သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရုံးများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစည်းမျဉ်းများချမှတ်ပြီးအထက်ပါပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန် Wtt မှသေချာစေခဲ့သည်။
၂။ Domicile plus ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်
Wtt ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစ၍ ဤဥပဒေကိုပုံမှန်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင်ဒတ်ခ်ျဆီးနိတ်သည် Wtt အားပြင်ဆင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောဒတ်ခ်ျယုံကြည်စိတ်ချရသောရုံးကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ 2004 (Wtt 6) နှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသောရုံးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ချက်များမှာပိုမိုတင်းကြပ်လာပြီးကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တွင် ပိုမို၍ ဥပဒေပြဌာန်းခြင်းနည်းလမ်းများရှိသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည်အခြားသူများအကြား 'domicile plus ထောက်ပံ့ခြင်း' ဟူသောအယူအဆကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ Wtt ဟောင်းလက်အောက်တွင်အောက်ပါ ၀ န်ဆောင်မှုကိုယုံကြည်ရသော ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်လိပ်စာတစ်ခုပေးအပ်ခြင်း။ ဤသည်ကိုလည်းဟုခေါ်သည် domicile ပေါင်းပြ္ဌာန်းချက်.
ပထမ ဦး စွာ domicile ၏ပြthe္ဌာန်းချက်တွင်မည်သည့်အရာများပါ ၀ င်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ Wtt အရ, domicile ၏ပြဌာန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် စာတိုက်လိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်လာရောက်လည်ပတ်သည့်လိပ်စာများကိုအမိန့်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လိပ်စာပေးသူကဲ့သို့အုပ်စုတစုနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားလည်းကောင်း၊။ လိပ်စာပေးသောအဖွဲ့အစည်းသည်ဤပြဌာန်းချက်အပြင်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပါက domicile plus ၏ပြspeak္ဌာန်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသည်။ Wtt ၏အဆိုအရဤလှုပ်ရှားမှုများအားအတူတကွယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Wtt အဟောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပိုဝန်ဆောင်မှုများ
တရားဝင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ခန့်အပ်ခြင်း၊
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအပို ၀ န်ဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအတူတကွနေထိုင်ခြင်းနှင့်အတူနေထိုင်မှုတည်နေရာကို Wtt အဟောင်းမှယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းများသည် Wtt အရခွင့်ပြုချက်ရှိရမည်။
Wtt 2018 လက်အောက်တွင်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသည် ယခုတွင်၎င်းသည်အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
reception ည့်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမှအပတရား ၀ င်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အကူအညီပေးခြင်း၊
Wtt 2018 အောက်ရှိအပို ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Wtt အဟောင်းမှအပိုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်များစွာကွာခြားမှုမရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအနည်းငယ်တိုးချဲ့ပြီးအခွန်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ပေးမှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ထဲကထုတ်ယူလိုက်သည်၊
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Wtt 2018 ဟောင်း Wtt နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ, domicile ပေါင်း၏ပြprovision္ဌာန်းချက်နှင့်ပတ်သက်။ ကြီးစွာသောပြောင်းလဲမှုမြင်နိုင်ပါသည် ပုဒ်မ ၃၊ အပိုဒ် ၄၊ ပုဒ်မ ၄၊ Wtt3အရပုဒ်မတွင်ရည်ညွှန်းထားသည့်စာတိုက်လိပ်စာသို့မဟုတ်လာရောက်လည်ပတ်သောလိပ်စာနှစ်ခုလုံးကို ရည်ရွယ်၍ ဤဥပဒေ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုများကိုတားမြစ်သည်။ b) ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်၎င်းအပိုင်း၌ရည်ညွှန်းထားသည့်အပိုဆောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်၊ လူတစ် ဦး ချင်း၊ တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် domicile နှင့်အပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုမကြာခဏပေးဆောင်ခြင်းကြောင့်ဤတားမြစ်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် လက်တွေ့တွင်ကွဲကွာဆိုလိုသည်မှာဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပါတီတစ်ခုတည်းမှလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ဥပမာအားဖြင့်ပါတီတစ်ခုသည်အပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ဖောက်သည်အား domicile ထောက်ပံ့ပေးသောအခြားပါတီနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုသည်။ အပိုဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် domicile ပေးခြင်းကိုပါတီတစ်ခုတည်းကလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Wtt အရယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုကိုအခြေခံအားဖြင့်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုခွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့် Wtt အဟောင်းနှင့်အညီလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်လည်းမရှိပါ။ အနာဂတ်၌ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများခွဲခြားခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက် Wtt3ပုဒ်မ ၃၊ အပိုဒ် ၄၊ ပုဒ်မ ၄ တွင်တားမြစ်ချက်တစ်ခုပါဝင်သည်။
၃။ ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအားခွဲခြားခြင်းအားတားမြစ်ခြင်း၏လက်တွေ့ကျသောအကျိုးဆက်များ
Wtt ဟောင်း၏အဆိုအရ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသီးခြားခွဲ ထား၍ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှု၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ သို့သော် ၂၀၁၈ Wtt ပုဒ်မ ၄၊ အပိုဒ် ၄၊ ပုဒ်မ ၄ ပါတားမြစ်ချက်အရယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုသီးခြားခွဲထားသည့်ပါတီများအနေဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထိုလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်တားမြစ်ထားသည်။ ၎င်းအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများကိုဤနည်းဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုသည့်ပါတီများသည်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပြီးဒတ်ခ်ျအမျိုးသားဘဏ်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်လည်းကျရောက်လိမ့်မည်။
Wtt 2018 အရ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်ထပ်တိုး ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်သောလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်သည့်အခါ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲအခြား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအခြားပါတီနှင့် ဆက်သွယ်၍ သူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုထပ်မံဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ထို့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ domicile နှင့်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ပါတီများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး အားဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဤကြားခံသူသည် domicile ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အပြင်အပို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းမလုပ်ဆောင်သည့်ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။
၄။ ဖောက်သည်များအား domicile ၏တိကျသောပံ့ပိုးပေးသူများထံရည်ညွှန်းခြင်း
လက်တွေ့တွင်အပို ၀ န်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်တွင်ဖောက်သည်အားသတ်သတ်မှတ်မှတ် domicile ပေးသူထံလွှဲပြောင်းပေးသောပါတီများရှိသည်။ ဤလွှဲပြောင်းမှုအတွက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်, domicile ၏ပံ့ပိုးပေးမကြာခဏ client ကိုရည်ညွှန်းသောပါတီမှကော်မရှင်ပေးဆောင်။ သို့သော် Wtt 2018 အရ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည် Wtt ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများက၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတမင်တကာခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိတော့ပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်ဖောက်သည်များအတွက်အပို ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည့်အခါထိုဖောက်သည်များအား domicile ၏ပံ့ပိုးပေးသူများထံလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Wtt အားရှောင်ရှားရန်ရည်ရွယ်သောပါတီများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်လွှဲပြောင်းမှုများအတွက်ကော်မရှင်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိသောအခါယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများခွဲထားသောပါတီများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။
Wtt မှသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးသည်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းဖော်ပြထားသည် ရည်ရွယ်သည် စာတိုက်လိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်လာရောက်လည်ပတ်သောလိပ်စာတစ်ခုနှင့်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနှစ်ခုလုံးသည်။ ပြင်ဆင်ချက်၏စာချွန်လွှာကိုရည်ညွှန်းသည် အဆက်အသွယ်အတွက် client ကိုဆောင်ခဲ့ ကွဲပြားခြားနားသောပါတီများနှင့်အတူ။  Wtt 2018 သည်ဥပဒေအသစ်ဖြစ်သဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ဤဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ထို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာစာပေများတွင်ဤဥပဒေပါ ၀ င်သောအပြောင်းအလဲများကိုသာဆွေးနွေးထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယခုအချိန်တွင်ဥပဒေသည်လက်တွေ့တွင်မည်သို့အတိအကျမည်သို့အလုပ်လုပ်မည်ကိုမရှင်းလင်းသေးပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် 'ရည်ရွယ်သည်' နှင့် 'ထိတွေ့မှု' နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတိအကျကျသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိအချိန်တွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ပုဒ်မ ၃၊ အပိုဒ် ၄၊ ခခ Wtt 3. ၏တားမြစ်ချက်အောက်တွင်ကျရောက်သည်ကိုပြောရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လျှောကျနေသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ် domicile ပေးသူများကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ထိုလွှဲပြောင်းမှုများအတွက်ကော်မရှင်လက်ခံခြင်းသည်ဖောက်သည်များအား domicile ပေးသူနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်စေသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအနေဖြင့်မူ domicile ၏ပံ့ပိုးသူကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိသော်လည်းကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများရှိသောအိမ်တွင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုအကြံပေးခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်သုံးစွဲသူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို domicile ပေးသူနှင့် 'ဖောက်သည်အားဆက်သွယ်မှု' အဖြစ်မြင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဤကိစ္စတွင်အတွက် client ကို domicile ၏ပံ့ပိုးပေးရှာတွေ့မှသူ့ကိုယ်သူမဆိုအားထုတ်မှုရန်မလိုအပ်ပါ။ ဂူးဂဲလ်ကိုဖြည့်စွက်ထားသောဂူးဂဲလ်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာသို့ရည်ညွှန်းသောအခါ“ သုံးစွဲသူအားအဆက်အသွယ်ဖြစ်စေသည်” ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်မေးခွန်းပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် domicile ပေးသူကိုမှအကြံပေးခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အတိုင်းအတာအတွင်းမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုအတိအကျကျရောက်နိုင်မည်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်တရား ၀ င်ဥပဒေတွင်ထပ်မံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်။
5 ။ ကောက်ချက်
Wtt 2018 သည်နောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်သောပါတီများအတွက်အဓိကအကျိုးဆက်များရှိနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုမူ domicile ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောအခြားပါတီတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ Wtt အဟောင်းလက်အောက်တွင်ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် Wtt ၏နယ်ပယ်အတွင်းမကျပါ။ ထို့ကြောင့် Wtt အရခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် Wtt 2018 အာဏာသက် ၀ င်လာသည်နှင့်အမျှယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများခွဲထုတ်ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ ယခုမှစ။ , domicile ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းန်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့အစည်းများ, Wtt ၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ကျနှင့်ဤဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ လက်တွေ့တွင်အပို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပြီးသူတို့၏ဖောက်သည်များအား domicile ပေးသူထံလွှဲပြောင်းပေးသည်။ သူတို့ရည်ညွှန်းသောဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက်သူတို့သည် domicile ပေးသူထံမှကော်မရှင်တစ်ခုရရှိသည်။ Wtt 2018 စတင်အာဏာတည်ပြီးကတည်းက ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့် Wtt ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတမင်တကာခွဲခြားရန်ခွင့်မပြုတော့ပါ။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာအလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့အစည်းများ, ထို့ကြောင့်သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အရေးပါကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများတွင်ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း ၂ ခုရှိသည် - ၄ င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုညှိနှိုင်းသည်သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့သည် Wtt ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ကျရောက်သောကြောင့်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပြီးဒတ်ခ်ျဗဟိုဘဏ်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်၌မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ mr ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Maxim Hodak, ရှေ့နေမှာ Law & More မှတဆင့် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]ဒါမှမဟုတ် mr ။ တွမ် Meevis, မှာရှေ့နေ Law & More မှတဆင့် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]သို့မဟုတ် +31 (0) 40-3690680 ကိုခေါ်ပါ။
 ကေဖရီလင်ခ်၊ Nederland ရှိ Toezicht Trustkantoren, Deventer: Wolters Kluwer Nederland 2004 ။
 Kamerstukken II 2017/18, 34 910,7(Nota ဗန် Wijziging) ။
ယခင် Post မှ ဒတ်ခ်ျရာသီဥတုသဘောတူညီချက်
Next Post ရုရှား၏ဖျက်ဆီးခြင်းစီရင်ချက်အားအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း